ရဲအုပ်ဝင်းနိုင်၊ ဆလုံလူမျိုး - ဘာသာ၂ခုကြားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာ ဇနီး၊မိဘဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများအကြောင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်စခဲ့တဲ့ ခရစ်တော်ရရှိပြီးအသက်တာ၊ မူးရစ်ရဲအရာရှိဘ၀ ထားဝယ်၊မော်လမြိုင်၊ သံတောင်၊ လိုင်ဇာ၊ ဗန်းမော် စသဖြင့် မိမိရဲ့ရိုးရိုးလေးနေထိုင်သွားတဲ့ဘ၀ သူ့အတွက် အလွန်ဝမ်းသာတဲ့ဘ၀ကိုရရှိကြောင်း
Read more: ရဲအုပ်ဝင်းနိုင် ကချင်၊ ကရင်ပြည်နယ်များတွင်...
ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ထွန်း နားရှိသောသူကြားပါစေ။ မျက်စိရှိသောသူ မြင်ပါစေ။
နားရှိသောသူကြားပါစေ။ မျက်စိရှိသောသူ မြင်ပါစေ။ ပြဿနာက အာရုံမပြုသော အမှု ရဲ့ ဆိုးကြိုးကို ပြောချင်ပါတယ်။
ဟေရှာယ ဟောခဲ့တဲ့ခေတ် အခုခေတ်ပါ။ ၁၂နှစ် ဘယ်နှစ်တန်းလဲ ၇တန်း ဆိုတော့ တော်တော်တတ်နေပါတယ်။
Read more: ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ထွန်း နားရှိသောသူကြားပါစေ။...
လှပသော စာလွှာ *Beautiful Message*.
May 1 at 4:40am ·
သူဌေး တစ်ယောက် သူ့မိတ်ဆွေ သူဌေး တစ်ဦး အကျဉ်း ထောင်ကျ သူ ကို ကြည့်ပြီး သူ လွတ်လပ်နေ တဲ့ အတွက် ဘုရား သခင် ကို ကျေးဇူး တင် နေတယ်။
လူတစ်ယောက်က ဆင်းရဲနွမ်းပါးလှ သူတစ်ဦးကိုကြည့်ပြီး မိမိဟာ
Read more: လှပသော စာလွှာ *Beautiful Message*.
သင်းအုပ်၏ မူလတာဝန် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ (အထူး) လိုအပ်နေတဲ့သင်းအုပ်ဆရာ
မြန်မာနှင့်နိုင်ငံခြားသား သင်းအုပ်ဆရာများစွာနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဧ၀ံဂေလိဆရာ၊ ကျမ်းစာကျောင်းဆရာ များနဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ အလုပ်က အတော်ကွာခြားပါတယ်။ သင်းအုပ်ဆရာဆိုတာ အပြောကောင်းရုံနဲ့ဘုန်းတော်မထင်ရှားပါဘူး။ ပုံသက်သေကောင်းရပါတယ်။
Read more: သင်းအုပ်၏ မူလတာဝန် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ (အထူး)...
ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေ(၇)ချက်..နဲ့ မေတ္တာနဲ့ ပေးတဲ့ ကိုရဲမင်း App
Deliverance Ministry ၀ိညာဉ်ဆိုး၊နတ်ဆိုးထုတ်ခြင်း
ဒီအကြောင်း အနည်းငယ်ရေးချင်လာပါတယ်။ အာဖရိက နိုင်ဂျီးရီးယာနိုင်ငံ က တီပီဂျော်ရှဝါ T.P Joshua မဟာအသင်းတော်ကြီးက ဒုက္ခရောက်သူများစွာကို နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ ကယ်တင်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်းများစွာ ပြသနိုင်ခြင်း၊ ၀ိညာဉ်ဆိုး
Read more: Deliverance Ministry ၀ိညာဉ်ဆိုး၊နတ်ဆိုးထုတ်ခြင်း
၁၉၄၀ နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာ(၄၀)၊ သတိနဲ့အသင့်ရှိကြပါ။ 40 SIGNS OF CHRIST’S RETURN FULFILLED SINCE 1940 by Christine Darg
၁၉၄၀ နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာ(၄၀)၊ သတိနဲ့အသင့်ရှိကြပါ။
နောက်ဆုံးသောကာလ၊ ယေရှု ဆိုတဲ့ ကယ်တင်ရှင်မေရှိယ ဂတိတော်အတိုင်း ပြန်လာချိန် အလွန်နီးနေပြီး ဆိုတာ အောက်ဖော်ပြပါ နမိတ်ကြီး (၄၀) နဲ့ ပြနေပါတယ်။ ကျမ်းစာထဲမှာ ရေးထားတာတွေ တကယ်ဖြစ်နေပါပြီ။ ပထမအကြိမ် ကြွလာတုန်းက လူအများမသိကြသလို
Read more: ၁၉၄၀ နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာ(၄၀)၊...
GMYC ၂၀၁၇ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (ချင်းမိုင်) က ဆရာစံတိုး
GMYC လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (ချင်းမိုင်) က ဆရာစံတိုး တရားဟောတာနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဒေးဗစ်လား အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံက တရားဟောဆရာများ၊ တကမ္ဘာလုံးက ယုံကြည်သူ လူငယ်များ တွေ့ဆုံ၊ ချီးမွမ်း၊ သက်သေခံ၊ မိတ်သဟာရ၊ ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းနဲ့ ၄ည ဆက်တိုက် ဓမ္မသဘင်
Read more: GMYC ၂၀၁၇ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (ချင်းမိုင်) က...
ကယ်တင်မှာလာ၊ အပြစ်တင်မှာလား... ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးတဲ့ ခရစ်တော်နောက်လိုက်တယောက်
ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးတဲ့ ခရစ်တော်နောက်လိုက်တယောက်ဟာ ခရစ်ယန်အသက်တာ (ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းဖို့) ကြိုးစားရပါတော့မယ်။
Read more: ကယ်တင်မှာလာ၊ အပြစ်တင်မှာလား......
ခင်ပွန်းသည် ဆရာဦးထွန်းလင်း (ကွယ်လွန် 2008) က ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီး၊ ကျမက အထက်တန်းဆရာမဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည်က အလုပ်ထွက်ပြီး ဘုရားသခင်ကြွေးတာစားချင်တယ် ဆိုတော့ ကျမက အင်ဂျင်နီယာယောင်္ကျားကို ယူထားတာ အင်ဂျင်နီယာကတော်ဖြစ်ချင်လို့ လက်ထပ်ခဲ့တာ၊
Read more: ပင်လုံနှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်မြထွန်း
ရင့်ကျက်သောခရစ်ယာန် - GROWING TOWARDS MATURITY AS A CHURCH , Rev. Kenny Fam
ရင့်ကျက်သောခရစ်ယာန် - GROWING TOWARDS MATURITY AS A CHURCH , Rev. Kenny Fam ... သင်းအုပ်ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဘောက်မှာ Immature မရင့်ကျက်သေးခြင်း ဆိုတာကို ဖတ်မိပါတယ်။ လူတွေ ဘုရားကျောင်းကို အပတ်စဉ်လာသူများမှာ
Read more: ရင့်ကျက်သောခရစ်ယာန် - GROWING TOWARDS MATURITY...
ကယ်တင်ခြင်းရပီးသူတယောက်ဟာ ကျေးဇူးသိတတ်သူဖြစ်လာပြီး ပေးလှုခြင်းက အလိုအလျောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဝိညာဉ်ရေး နှလုံးသားပွင့်သွားပီးရင် ပိုက်ဆံအိတ်များလဲ ပွင့်သွားပါတယ်။ တားမရတော့ပါ။ မုဆိုးမ ကြေးနီဒင်္ဂါး ၂ပြား ဗိမာန်တော်အလှုငွေပုံးထဲ သွတ်သွင်းနေတာကို မြင်တဲ့ သခင်ယေရှုက
Read more: ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးလှုခြင်း